Eng. Camey oo Sheegay in Waxgarad loo Diray Colaadaha gobolka Sool – Radio Daljir
Seteembar 24, 2015 6:10 b 0
Garowe, September 24, 2015 : Madaxweyne ku xigeenka Dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdullahi Xaaji Cumar oo dadweynaha Garowe kula tukaday Garoonka kubada cagta ee Mira Awaare ayaa sheegay in dirirtii shalay ka dhacday deegaanka Qorilay ay ahayd mid ay ka xunyihiin.
Camay ayaa tilmaamay in hada aysan ool maxay u dhacday balse loo baahan yahay in la xaliyo colaada labada beelood ee walaala ha ah.wuxuu hadalkiisa ku daray in dhamaynta colaada ay utaal dhamaan dowladda iyo shacabkaba.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa xusay in dowladdu doorkeeda ay qaadanayso oo Odayaal ay ubaxeen sidii loo dhamayn lahaa colaada,iyagoo kuwa kalana ay kadaba bixi doonaan.
Wuxuu ugu baaqay dadweynaha inay qayb ka qaataan sidii loo soo afjari lahaa colaada mudada soo noq noqotay ee u dhaxaysa labada beelood isagoo tilmaamay in dowladda kaligeed aysan dhamaynkarin arintaa.
Hadalka Camay ayaa kusoo aaday xili shalay uu dagaal ku dhexmaray laba beelood deegaanka Qorilay oo ka tirsan gobolka Sool oo ay ku dhinteen 12 Ruux halka 9 Ruuxoo kalana ay ku dhaawac meen.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Jimco_25